Bit By Bit - Abuuritaanka wada shaqeyn xooggan - 5.2 xisaabinta Human
Mashaariicda xisaabinta bani'aadamnimada waxay qaadataa dhibaato weyn, burburiso qaybo fudud, u dir shaqaalaha shaqaale badan, ka dibna isku dara natiijooyinka.
Mashaariicda xisaabinta dadka ayaa isku darsamaya dadaallada dad badan oo ka shaqeynaya microtasks fudud si ay u xalliyaan mushkiladaha aan macquul ahayn hal qof. Waxaa laga yaabaa inaad haysato dhibaato cilmi-baaris oo ku haboon xisaabinta aadanaha haddii aad waligaa ku fikirtay: "Waan xalin karaa dhibaatadan haddii aan lahaa kun caawiye cilmi-baarayaal ah."
Tusaale ahaan sawirka mashruuca xisaabinta dadka waa Galaxy Zoo. Mashruucaan, in ka badan boqol kun oo mutadawiciin ah ayaa sawirada sawirada qiyaastii hal malyan oo galaxyo ah oo si sax ah u la mid ah kuwii horayba jiray iyo dadaaladii aadka u yaraa ee ahaa astronomers. Miisaankani wuxuu kordhay wada-shaqeyn xooggan oo ay keentay helitaan cusub oo ku saabsan qaabka uu u socdo qaabka galaxiisku, waxana uu u soo jeestay fasal cusub oo galaxiis ah oo la yiraahdo "Green Peas."
Inkasta oo Galaxy Zoo laga yaabo inay ka fog tahay cilmibaaris bulsheed, waxaa jira xaalado dhab ah oo ay cilmi-baarayaasha bulshadu doonayaan inay codeeyaan, kala soocaan, ama ku calaamadiyaan sawirada ama qoraallada. Xaaladaha qaarkood, falanqayntan waxaa sameeya kombuyuutarrada, laakiin waxaa jira noocyo kale oo falanqeyn ah oo ku adag kumbuyuutarrada, laakiin dadku way fudud yihiin. Waa kuwan kuwa sahlan ee loogu talagalay mashiinnada kumbuyuutarada ee adag ee aan u gudbin karno mashaariicda xisaabinta dadka.
Ma aha oo kaliya microtask ee Galaxy Zoo guud ahaan, laakiin dhismaha mashruuca waa guud ahaan sidoo kale. Galaxy Zoo, iyo mashaariicda kale ee macaamiisha xisaabinta, sida caadiga ah waxay isticmaalaan istaraatiijiyad isku-dhafan oo isku-dhafan (Wickham 2011) , markaad fahamto istaraatiijiyadan waxaad awoodi doontaa inaad isticmaasho si aad u xalliso dhibaatooyin badan. Ugu horreyntii, dhibaatada weyni waxay u dhexeysaa kala- goysyada yar yar. Kadib, shaqada bani'aadamnimada waxaa lagu dabaqaa walaaq kasta oo dhib yar, si madaxbannaan oo kale. Ugu dambeyntii, natiijooyinka shaqadan ayaa la isku daraa si ay u soo saaraan xal heshiis ah. Marka la eego taariikhdaas, aynu eegno sida istiraatiijiga ah ee isku-darka-is-dhexgalka loo adeegsado Galaxy Zoo.